Metal Gear siri ike 5 gbawara - The Phantom Pain Working Crack 2018
Home » Games » Metal Gear siri ike 5 Crack
site Anastasiya Libra | December 18, 2017
Download Metal Gear Solid 5 ịgbawa Free
Metal Gear siri ike V Crack, wepụtara n'ụwa nile na September 1, 2015. Phantom Pain bụ ihe na-emeghe ụwa emereme-njem stealth game. Metal Gear siri ike 5 Crack e mepụtara maka Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 na Xbox One. Na The phantom Pain, Player na-ọrụ nke elò agwọ na-emeghe ụwa gburugburu ebe obibi. The player ga sinik si ọtụtụ ihe na egwuregwu ụwa, na-ezere onye iro nche, na fọdụrụ dịghị. Metal Gear siri ike V Crack, na ihe ọkpụkpọ nwere ike ịnyagharịa na mgbakwunye na-ejegharị ejegharị na ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya, iji ugbo ala dị ka ụgbọala na tankị. Ụfọdụ ebe ndị bụ ugwu ugwu; players can also select to scale a rock face as a shortcut. Ọzọkwa nwere ike na-akpọ maka helikọpta support megide onye iro agha na a ọgụ njikere. Ọ nwekwara ike izipu iwu na ledo ọmụma a lekwasịrị ebe.
Metal Gear Solid V Serial Key, na-atụmatụ a isi-ụlọ usoro na-enye ohere Player ịzụlite ngwá agha na ihe si n'ụlọ ha isi. The Fulton n'elu-to-ikuku mgbake usoro na egwuregwu bụ ugbu a ike ibufe weghaara agha na ihe ndị ọzọ dị otú ahụ dị ka ụmụ anụmanụ ma ọ bụ ugbo ala azụ Nne Base. Ego maka upgrading Nne Base si technology nwere ike ịbụ anakọtara site na ihe hụrụ niile map (dị ka diamonds, mbupu containers, ntụziaka igbe). Ego nwekwara ike ga-enwetara site n'izite recruited agha na ọgụ ọzọ gburugburu ụwa. The ego na-nyekwara na upgrades ka ọdịdị na ikike, ngwá agha na ngwá ọrụ nke agwọ, ya Ai enyi, na vehicles.Metal Gear Solid 5, agụnye abụọ ọtụtụ ụdịdị. Mbụ bụ ọhụrụ Metal Gear Online. The abụọ ọtụtụ mode bụ ndọtị nke Nne Base isi-ụlọ feature. N'ụzọ nke a, egwuregwu nwere ike mụbaa ha arụmọrụ. Ndị a arụmọrụ na-eji na-agụnye “Forward Operating ndọkwasi” nke ike-eji n'ịwa ego. Ọzọkwa, ndị a arụmọrụ nwekwara ike ime ka ego maka otu-player mkpọsa
Metal Gear siri ike V Crack CPY, agụnye abụọ ọtụtụ ụdịdị. Mbụ bụ ọhụrụ Metal Gear Online. The abụọ ọtụtụ mode bụ ndọtị nke Nne Base isi-ụlọ feature. N'ụzọ nke a, egwuregwu nwere ike mụbaa ha arụmọrụ. Ndị a arụmọrụ na-eji na-agụnye “Forward Operating ndọkwasi” nke ike-eji n'ịwa ego. Ọzọkwa, ndị a arụmọrụ nwekwara ike ime ka ego maka otu-player mkpọsa.
Metal Gear siri ike 5 Ground Zeroes Atụmatụ
Metal Gear siri ike V Crack, mfe na-egwu na-echeghị na gameplay nnyonye anya
The egwuregwu nwere a ụbọchị-na-n'abalị okirikiri na-agba na ezigbo oge.
The Phantom Pain agụnye abụọ ọtụtụ ụdịdị
Weather mmetụta, dị ka oké ifufe na mmiri ozuzo-emetụta gameplay gburugburu ebe obibi.
A ọhụrụ egwuregwu imewe direction na-enye ohere ọkpụkpọ ka ahọrọ ihe wee na ha chọrọ akụkọ ihe na-ebe site na-ahọpụta ọzọ ke ọ bụla wee na ha na-amasị
Na agwọ olu bụ maka anya abuo, map, obere égbè, wakpo égbè na-agbawa agbawa bụ nke na-na-na egwuregwu ndị ọzọ na-akpali.
Metal Gear Solid V The Phantom Pain System chọrọ
Windows 7,8 Sistemụ nrụọrụ
28GB Free ohere nke ike
Olee otú Iji Crack Metal Gear Solid 5
download Metal Gear Solid V si nyere button na mkpuchi
Easy mgbape! Enwe.
← Trivia Crack ngwa 2.54.1 Mac Product Key Finder Pro 1.2.0.36 Crack →